ကောလာဟလတွေထွက်ပြီးနောက် အမှန်တကယ်လက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ Kangta နဲ့ Jeong Yu Mi တို့စုံတွဲ - Cele Gabar
ကောလာဟလတွေထွက်ပြီးနောက် အမှန်တကယ်လက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ Kangta နဲ့ Jeong Yu Mi တို့စုံတွဲ
H.O.T. အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kangta နဲ့မင်းသမီး Jeong Yu Mi တို့စုံတွဲကတော့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ တရားဝင်တွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က သူတို့နှစ်ဦးဟာ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ သတင်းတွေထွက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးစလုံးရဲ့အေဂျင်စီတွေမှ ဒီသတင်းတွေကို ငြင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာနှစ်ဖက်မိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ထပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။ Kangta ရဲ့မိဘတွေကတော့ Jeong Yu Mi ရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူတွေကိုသဘောကျခဲ့ပြီး Jeong Yu Mi ရဲ့မိဘတွေကလည်း Kangta ရဲ့ရိုးသားတဲ့ပုံစံတွေကြောင့် သဘောတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာပွဲကတော့ ဆောင်းရာသီမှပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။
သူတို့ကတော့ ဒီသတင်းကို နီးစပ်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကို အသိပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တစ်ကြိမ်ကကောလာဟလတွေထွက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ အခုတစ်ခါမှာတော့နှစ်ဖက်မိဘတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာတော့ ပရိသတ်တွေဆီကို မင်္ဂလာသတင်းကိုအသိပေးတော့မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
H.O.T. အဖြဲ့ရဲ့အဖြဲ့၀င္ေဟာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Kangta နဲ့မင္းသမီး Jeong Yu Mi တို့စံုတြဲကေတာ့ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ တရား၀င္တြဲေနျပီျဖစ္ေျကာင္းကို ပရိသတ္ေတြကိုအသိေပးခဲ့ပါတယ္။ မျကာေသးခင္က သူတို့ႏွစ္ဦးဟာ လက္ထပ္ေတာ့မယ္ဆိုျပီးေတာ့ သတင္းေတြထြက္ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဦးစလံုးရဲ့ေအဂ်င္စီေတြမွ ဒီသတင္းေတြကို ျငင္းဆိုထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုဆိုရင္ေတာ့ သူတို့ဟာႏွစ္ဖက္မိဘေတြနဲ့ေတြ့ဆံုခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ထပ္ဖို့အတြက္ျပင္ဆင္ေနျကျပီလို့ သိရပါတယ္။ Kangta ရဲ့မိဘေတြကေတာ့ Jeong Yu Mi ၇ဲ့ယဥ္ေက်းတဲ့အျပဳအမူေတြကိုသေဘာက်ခဲ့ျပီး Jeong Yu Mi ၇ဲ့မိဘေတြကလည္း Kangta ရဲ့ရိုးသားတဲ့ပံုစံေတြေျကာင့္ သေဘာေတြ့ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို့ႏွစ္ဦးရဲ့မဂၤလာပြဲကေတာ့ ေဆာင္းရာသီမွျပုလုပ္မယ္လုိ့သိရပါတယ္။
သူတို့ကေတာ့ ဒီသတင္းကို နီးစပ္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို အသိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တစ္ျကိမ္ကေကာလာဟလေတြထြက္ရွိခဲ့ေပမဲ့ အခုတစ္ခါမွာေတာ ့ႏွစ္ဖက္မိဘေတြ့ဆံုခဲ့ျပီး လက္ထပ္ဖို့ျပင္ဆင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မျကာခင္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြဆီကို မဂၤလာသတင္းကိုအသိေပးေတာ့မယ္လို့ ေမ်ွာ္လင့္ရပါတယ္။
Posted in International CeleTagged International Cele, Jeong Yu Mi, Kangta
Previous post အင်စတာဂရမ်မှပိုစ့်တွေအားလုံးကို ဖျက်ပစ်ခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် Jungkook
Next post ” အိမ်ခြေ ၂၆အိမ်ထောင်စုအတွက် ဆန် ကြက်သွန် အာလူး ဘက်စုံသုံးဆပ်ပြာရည် ဆပ်ပြာခရင်မ်တို့ကိုလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မျိုးစန္ဒီကျော်”